: insert : ZEKKEI Japan
အေးသောဆောင်းရာသီအကုန်နားရောက်လာပါက မကြာမီတွင် နွေးထွေးသော နွေဦးရောက်လာပါမည်။ ပန်းကြည့်မည့်အချိန်ကို ကြိုတင်ခန့် မှန်းသည့်သူများလည်း ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ အဆင်ပြေသည်မှာ အခုတလောတွင် အင်တာနက်ကိုအစထားကာ အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆာကူရာပန်းထင်ရှားသောနေရာများကို ရှာဖွေကာ ဆာကူရာပွင့်သည့်အနေအထားကို စုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။
ယခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်သည်မှာ ဆာကူရာနှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများကို သိပါက အပြည့်အဝဆာကူရာကို ခံစားနိုင်ပြီး ပြည့်စုံသောပန်းကြည့်ပွဲအချိန်ကို ကုန်ဆုံးနိုင်သည်ဟု ထင်ပါသည်။
၁။ပန်းပွင့်သည့်အချိန်ကို မိမိဘာသာခန့် မှန်းနိုင်ပါသည်
တီဗွီ၊အင်တာနက်များတွင် ဒေသအလိုက် အကြမ်းဖျင်းပန်းပွင့်သည့်အချိန်ကို အကြောင်းကြားသော်လည်း မိုးလေဝသအချက်အလက်များအရ ပန်းပွင့်သည့်အချိန်သည်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်အတွက် အကြောင်းကြားသည့်ရက်နှင့် ထပ်တူမကျသည်များလည်းရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆိုသော်လည်း ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုပါက ဆာကူရာပန်းပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သည့်အချိန်မှတော့ ကြည့်ချင်ကြတာပေါ့နော်။ ထို့ ကြောင့် တိုက်တွန်းချင်သည်မှာ ( ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည် ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုကျော်လွန် သောရက်များသည် ဆာကူရာပန်း ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သည့်) ဟု တွက်ချက်နိုင်ပါ (၂/၁ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်) +(၂/၂၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်)+ (၂/၃၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်)+ ဟု ပေါင်းပြီး ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကို ကျော်လွန်သောရက်များက အကြမ်းဖျင်းပန်းပွင့်သည့်အချိန်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ပန်းစပွင့်သည်မှ ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သည့်အထိ တစ်ပတ်ခန့် ကြာပါသည်။ ဒီတွက်ချက်မှုကို သိပါက မိမိဘာသာ ဒေသအသီးသီး၏ အနေအထားများဖြင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
၂။ ဆာကူရာတွင် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါသည်
ငါးတွင် သဘာဝငါးနှင့် မွေးမြူရေးငါးနှစ်မျိုးရှိသကဲ့သို့ ဆာကူရာတွင်လည်း သဘာဝအတိုင်းပေါက်နေသော ပန်းရိုင်းအမျိုးအသားနှင့် အမျိုးစပ်ကာဖြစ်လာသော ပန်းခြံထဲတွင်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလာသောအမျိုးအစား ရှိပါသည်။ ဂျပန်တွင်အများဆုံးတွေ့ နိုင်သည်မှာဆိုမဲအိယောရှိနောဟု ခေါ်ကြသော စိုက်ပျိုးအောင်မြင်လာ သော မျိုးဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် ရှေးအကျဆုံးဆာကူရာသည် သက်တမ်း၂၀၀၀ကျော်ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။ ထို့ နောက် အထူးသဖြင့် သက်တမ်းရှည်သော ဆာကူရာပန်း၃မျိုးကို ဖော်ထုတ်ကာ (ဂျပန်၏ထင်ရှားသောဆာကူရာသုံးခု)ဟုလည်း ခေါ်ကြပါသည်။
၁။ယာမတကရှင်းဒိုင်းဆာကူရာ (ယာမနာရှိခရိုင် ဟိုခုတိုမြို့ မုခဝချော ယာမတက)သက်တမ်း ၁၈၀၀ နှစ်နှင့် ၂၀၀၀နှစ်ဟု ဆိုကြပါသည်
၂။နဲအိုတနိအုစုဇုမိဆာကူရာ(ဂိဖုခရိုင် မိုတိုစုမြို့ နဲအိုအိတချော)သက်တမ်း ၁၅၀၀နှစ်ကျော်
၃။ ဆန်းချွန်းတခိဆာကူရာ(ဖုခုရှိမခရိုင် တမုရာအုပ်စု ဆန်းချွန်းချော) သက်တမ်း ၁၀၀၀နှစ်ကျော်
ဆာကူရာတွင် (ဂျွန်းခဲစွတ်) (ဆဲအိရှင်းဘိ) စသော များစွာသော ပန်းစကားလုံးများရှိပါသည်။ ရာသီအသစ်အစတွင် လတ်ဆတ်သောစိတ်များဖြင့် လှပသော ဆာကူရာပန်းများကို ကြည့်ကြပါစို့ 
( ဘယ်ဘက်စွန်းမှာ ထိုင်လို့ မရဘူးလား ? ) ဟာခတ ည ရဲ့ ကာရံညီမှု ( ဈေးတန်း ) ကို မသွားခင် သိထားရမယ့် စည်းမျဉ်း ၆ ခု
ဖူခုအိုခ ဟာခတ ည ရဲ့ ကာရံညီမှုလို့ ပြောရင် ( ဈေးဆိုင်တန်း ) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ညရောက်ရင် လမ်းတွေမှာ အနီရောင်မီးပုံးတွေ တန်းစီချိတ်ဆွဲထားပြီး ဒေသခံတွေ နဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ ဖြင့် စည်ကားနေပါတယ်။ သက်...
( အာဂျိဆိုင်းပန်းမှာ အဆိပ်ရှိလား ? ) အာဂျိဆိုင်းပန်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက် ၅ ခု
ဇွန်လက အာဂျိဆိုင်းပန်းရာသီချိန်ဖြစ်တယ်။ ခရီးသွားဖို့ က မိုးများတဲ့ရာသီဖြစ်ပေမယ့် မိုးရေဖြင့် စိုပြေလာတဲ့ အာဂျိဆိုင်းပန်းရဲ့ အလှကို ရှာဖွေခံစားကြည့်ပြီး ဆက်ဆက်ခရီးထွက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အာဂျိဆိုင်းပ...
(တိုကျို -အိုဆာကာသည်၂၂၁၀ ယန်း) ပြည်တွင်းခရီးတွင် အမြန်ဆုံးဘတ်စ်ကို မစီးပါက ရှုံး နိုင်သည့်နေရာ၅ ခု
ပြည်တွင်းခရီးသွားသည့်အချိန်တွင် ဆက်ဆက်အကျိုးရှိသော အမြန်ဘတ်စ်ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်ဘတ်စ်တွင် အားသာချက်များစွာရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ဒီတစ်ကြိမ်တွင် အမြန်ဘတ်စ်ကို မသုံးပါက ရှုံးနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းငါးခု...
ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အချိုးအစားတွင် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ရထားလိုင်းကွန်ယက်သည် လုံလောက်ပြည့်စုံလျက်ရှိနေသော နိုင်ငံဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရထားလိုင်းအရှည်သည် မည်မျှရှိသလဲသိပါသလ...